အရိုက်ခံချင်တဲ့ ဦးပေါ်ဦး နဲ့ လေဝန်ဦးပေါ်ဦး - Thutazone
အရိုက်ခံချင်တဲ့ ဦးပေါ်ဦး နဲ့ လေဝန်ဦးပေါ်ဦး
တနေ့မှာ ဘိုးတော်ဘုရားက တိုင်းခန်းလှည့်သတဲ့။ အဲဒီအခါမှာ မိန်းမ တစ်ယောက်က သူ့ကလေးကို ရိုက်နေသတဲ့။ ဒီတော့ ဘိုးတော်ဘုရားက ကလေးကို သူလိုချင်တာ ချော့မော့ပြီးပေးရင် ၊ ချော့ရင် ဖြစ်ပါလျှက်နဲ့ ရိုက်ရမလားဆိုပြီး အဲဒီမိန်းမကို ကြိမ် နဲ့ အရိုက်ခိုင်းသတဲ့။ ဒါနဲ့ နန်းတော်ကို ပြန်ရောက်ကြတော့ ဦးပေါ်ဦးက ကလေးဆိုတာ ရိုက်သင့်တဲ့အခါ ရိုက်ရကြောင်း ၊ သူတို့ ပူဆာတိုင်းလုပ်လို့အဖြစ်နိုင်ကြောင်းပြောပြီး ရှင်ဘုရင်ကိုဝေဖန်တာပေါ့လေ။
ရှင်ဘုရင်ကလည်း “ဘာကြောင့်မပေးနိုင်ရမှာလဲ။နင်ပဲ ငါ့ကိုကလေးလိုပူဆာစမ်း “ဆိုတော့..။
ဦးပေါ်ဦးက “ ဆင်ကြီးလိုချင်တယ် ဘုရား ´´ ပေါ့။
ဘိုးတော် ကလည်း “ ပေးနိုင်တယ် ကွာ“ ပေါ့။
ဦးပေါ်ဦးက “ ရွှေအိုးပုတ်လေးလိုချင်တယ်။“ ဆက်ပူဆာတော့ ..။
ရှင်ဘုရင် က “ ပေးနိုင်တယ်“ ပေါ့။
ဒီတော့ ဦးပေါ်ဦး က “ ဆင်ကြီးကို ရွှေအိုးပုတ်ထဲ ထည့်ပေးပါဘုရား။ “ လို့ ဆက်ပြီးလျှောက်တော့ ဘိုးတော်ဘုရားက ရယ်မောတော်မူပြီး ..။
“ ပေါ်ဦး အရိုက်ခံချင်ပြီမှတ်တယ်။“ တဲ့။
ထိုကဲ့သို့ ချက်ကျကျပြန်လည်လျှောက်တင်ချက်ကိုသဘောကျတော်မူတဲ့အတွက် ဦးပေါ်ဦးကို ဆုလဘ်များစွာ ချီးမြှင့်လေတော့သည်။
အခါတစ်ပါးတွင် ဘိုးတော်ဦးဝိုင်းက ဦးပေါ်ဦးကို ကျီစယ်လိုသော သဘောဖြင့်…
“ ပေါ်ဦးဟာ ငါ့ရဲ့အိမ်တော်ထိန်းလဲဖြစ် ၊ ငါ၏အကျိုးကို အလွန်ပဲသယ်ပိုးတဲ့အတွက် မြေဝန်ခန့်ထားတော်မူမယ် ။ နန်းတော်ကြီးအတက်အဆင်း လှေကားကစပြီး အလျားခုနှစ်တောင် ၊ အနံခုနှစ်တောင်မြေကို ကုန်အောင်စားရမည် ။ ” ဟု အမိန့်တော်ရှိလေသည်။
“ မောင်မင်းကို လှေကားခြေရင်းက မြေကိုစားစေသည် ဟုလည်း အမိန့်တော်ချမှတ်ခဲ့သည် ။ ယခုတမူ မောင်မင်းသည်မြေကြီးကိုမစားပဲ မြေခွန်ကို ကောက်ခံစားနေသည်မှာ ငါ၏အမိန့်ကိုဖီဆန်ရာကြနေပြီ ၊ ဘာများလျှောက်ထားလိုသလဲပေါ်ဦး ”
“ မှန်လှပါ ၊ အရှင်မင်း၏အမိန့်တော်မြတ်မှာ ( မြေဝန် ) ခန့်တော်မူမည်ဟု နန်းတော်လှေကားခြေရင်မှ အနံ ၇ တောင်မျှရှိသော မြေကို အပိုင်စားစေခဲ့ပါသည် ။ မြေဝန်တို့မည်သည်မှာ မိမိကို အပိုင်စားပေးထားသည့် မြေပေါ်သို့ကျုးကျော်ဖြတ်သန်းသမျှ မြေခွန်ကောက်ရသည်မှာ အစဉ်အလာရှိပါသဖြင့် ဘုရင့်အမိန့်တော် အရသာ ကောက်ခံရခြင်းမှာ ပေါ်ဦးတွင် အပြစ်မရှိပါ ဘုရား ”
“ ပေါ်ဦးကစကားကို အလွန်တတ်သည် ။ မြေဝန်နှင့်မတော် ၊ ယနေ့မှစပြီး လေဝန်အဖြစ်ခန့် တော်မူလိုက်သည် ”
ဟုပြောင်းလဲ သတ်မှတ်လိုက်သည် ။
ဦးပေါ်ဦးသည်လည်း ဘုရင်မင်းမြတ်က ငါ့အစွမ်းကို စမ်းလေသည် ။ ဘာမျှအရာမထင်သော လေကိုစားစေသည်မှာ ငါ့အား ကျီစယ်ပျက်ရယ်ပြုဟန်တူသည် ဟု စဉ်းစားပြီး ကမ်းနားဆိပ်တွင်လာသမျှ ရွက်လှေများအား ကမ်းသို့ကပ်စေပြီး ( လေခွန်တော် ) ကောက်ခံ
လေသည်ကို လှေသကြီးများက ဆိပ်ကမ်းခွန် အကောက်ခွန်ပေးဆောင်ပြီးပါလျက် ၊ ယခုတဖန် ( လေခွန်တော် ) တိုးသည်ကို မကျေမနပ်နှင့် စောဒက တက်ကြရာ ၊ ဘုရင့်ရွှေနားတော်သို့ ပေါက်ကြားလေသဖြင့် ပေါ်ဦးကို ခေါ်တော်မူပြီး
“ ပေါ်ဦးမောင်မင်းဟာ ဘယ်သူအမိန့်နဲ့ အခွန်တော် တမျိုးထပ်တိုးလို့ ကောက်ရပြန်တာလဲ ”
“ မှန်လှပါ …. လေဝန်အရာခန့် တော်မူခြင်း ခံရပါသဖြင့် ရွက်လှေတို့သည် ဘုရာ့ကျွန် ငပေါ်ဦး ပိုင်ဆိုင်သည့်လေကို ရွက်တိုက်အသုံးပြုကြပါသဖြင့် ( လေဝန် ) ၏တာဝန်အရလေကို အသုံးပြုသူတို့ထံမှ အခွန်တော်ကောက်ခံရခြင်းဖြစ်ကြောင်း ၊ ယခုပင်လျှင် အရှင်မင်းမြတ်၏ စားဖိုဆောင်တွင် စားဖိုမှူးကို ချောင်းမြောင်းကြည့်ရှူနေဆဲ…. အရှင်မင်းမြတ် အမိန့်တော်ကြောင့် တဖူနာသွားရကြောင်းပါဘုရား ”
“ ငါ့စားဖိုမှူးကိုဘာကြောင့်မောင်မင်းက ချောင်းမြောင်းကြည့်နေရတာလဲ ”
“ မှန်လှပါ …. စားဖိုမှူးသည် ထင်းရေစိုကို သုံးမိသောအခါ မီးတောက်စေရန် ( မီးပြောင်း ) ကို မှုတ်ရပါလိမ့်မည် ၊ မီးပြောင်းသာမှုတ်ခဲ့ပါလျှင် ကျွန်တော်မျိုးအပိုင်စားပေးထားသည့် ( လေ ) ကို အသုံးပြုသည့်အတွက် လေခွန်တော်ကောက်ရန် ချောင်းမြောင်းနေခြင်းဖြစ်ပါကြောင်း ဘုရား ”
“ ကဲကဲ ငါကျီစားတော်မူတာပါ ၊ ( လေဝန် ) အရာကလဲနုတ်သိမ်းလိုက်ပရစေတော့ ၊ လေခွန်တွေလဲမကောက်ပါနဲ့တော့ ၊ တော်တော်ကြာ အန္တရာယ် မလွယ်နိုင်လို့ လေလည်တာတောင် အခွန်ကောက်ဦးမယ့် ပေါ်ဦးပဲ ” ဟု ရယ်မောရင်း လေဝန်အရာနုတ်သိမ်းလိုက်ပြန်လေသတည်း ။